ဆောငျးယှနျးစံနဲ့ အမြိုးတျောဖို့ကွိုးစားနတေယျဆိုတဲ့ ပိုငျတံခှနျရဲ့အမ – စှယျစုံသုတ
ဆောငျးယှနျးစံနဲ့ အမြိုးတျောဖို့ကွိုးစားနတေယျဆိုတဲ့ ပိုငျတံခှနျရဲ့အမ
ဆောငျးယှနျးစံကတျောလှနျရေးကွီးမှာလဲပွညျသူတှနေဲ့အတူပါဝငျခဲ့ပါတယျနျော။မကွာခငျကမှ မငျးသမီးခြောလေး ဆောငျးယှနျးစံကတော့ သူငယျခငျြးမီးနိုနဲ့အတူ ကငျဆာရောဂါကို အပွငျးအထနျခံစားနရေတဲ့ ကလေးငယျလေးအတှကျ လိုအပျနတေဲ့ ဆေးဖိုးကို တတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျးခဲ့ပါသေးတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျတှကေလဲပိုငျတံခှနျနကေောငျးကနျြးမာကွောငျးပွောကွားထားသေးပါတယျ၊ ပိုငျတံခှနျရဲ့အဈမ မခေဈြသှေးကတော့ မောငျဖွဈသူ ပိုငျတံခှနျလိုပဲ ခဈြစရာအပွုံလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
မခေဈြသှေးကိုတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျခွငျးမရှိပမေဲ့လညျး ပရိသတျတှကေ သူမကို ခဈြခငျနကွေပွီပဲဖွဈပါတယျ။ မခေဈြသှေးက မကွာခဏဆိုသလို သူမရဲ့ဖဘေု့တျစာမကျြနှာထကျမှာလညျး အပြျောစာလေးတှကေို တငျထားတတျသူဖွဈပွီး တဈခါတဈခါမှာလညျး မောငျဖွဈသူ ပိုငျတံခှနျရဲ့သတငျးအကွောငျးလေးကိုလညျး ပရိသတျအလှမျးပွအေောငျ တငျထားတတျပါသေးတယျ. ..
မခေဈြသှေးကလှမျးတယျကောကျစိနျရေ၊ကငျမရာပွနျကိုငျခငျြနပွေီ ဆိုပွီးတော့ ပုံနှငျတကှသူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာရေးသားဖျောပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရော သူမတို့နှဈယောကျရဲ့ခဈြခွငျးအတှကျ တဈခုခုရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော..
Source: May Chit Thwe
ဆောင်းယွန်းစံနဲ့ အမျိုးတော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမ
မကြာခင်ကမှ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းယွန်းစံကတော့ သူငယ်ချင်းမီးနိုနဲ့အတူ ကင်ဆာရောဂါကို အပြင်းအထန်ခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်လေးအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးဖိုးကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမဖြစ်တဲ့မေချစ်သွေးကိုတော့ပရိတ်သတ်တွေသိကြမှာပါ၊သူမကတော့သရုပ်ဆောင်ပိုငိတံခွန်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလဲပိုင်တံခွန်နေကောင်းကျန်းမာကြောင်းပြောကြားထားသေးပါတယ်၊ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မမေချစ်သွေးကတော့ မောင်ဖြစ်သူ ပိုင်တံခွန်လိုပဲ ချစ်စရာအပြုံလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေချစ်သွေးကိုတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်း ပရိသတ်တွေက သူမကို ချစ်ခင်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေချစ်သွေးက မကြာခဏဆိုသလို သူမရဲ့ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာလည်း အပျော်စာလေးတွေကို တင်ထားတတ်သူဖြစ်
ပြီး တစ်ခါတစ်ခါမှာလည်း မောင်ဖြစ်သူ ပိုင်တံခွန်ရဲ့သတင်းအကြောင်းလေးကိုလည်း ပရိသတ်အလွမ်းပြေအောင် တင်ထားတတ်ပါသေးတယ်. ..ယခုတစ်ခါမှာလဲမေချစ်သွေးကသရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းစံနှင့်ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြောင်းကိုအလင်းပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေချစ်သွေးကလွမ်းတယ်ကောက်စိန်ရေ၊ကင်မရာပြန်ကိုင်ချင်နေပြီဆိုပြီးတော့ပုံနှင်တကွသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရော သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းအတွက် တစ်ခုခုရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်..
ကိုယျဝနျလေးလရှိတဲ့ အလောငျးကိုသှားသယျရငျး သူ့ရဲ့ဘဝမှာ ဘယျတော့မှမလေို့မရနိုငျတော့တဲ့ဖွဈရပျတဈခုကိုဖှငျ့ဟလာတဲ့ ပရဟိတသမားတဈဦး